FBI-da oo baaraysa xogta nin dhalasho Mareykan haysta oo Muqdisho isku qarxiyey – SBC
FBI-da oo baaraysa xogta nin dhalasho Mareykan haysta oo Muqdisho isku qarxiyey
Laanta dambi baarista Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FBI ayaa shaaca ka qaaday inay baarayso xogta nin la sheegayu in uu haysto dhalashada Mareykanka oo Muqdisho isku qarxiyey todobaadkan, kaasi oo galaaftey nolashiisii iyo 2 ka mid ah ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
“Waxaynu ka warheynaa bamka ka qarxay Soomaaliya, waxaynu halkaasi inoo jooga ciidan, waana la shaqeynaynaaa si aan u ogaano xogta qofka isqarxiyey” sidaasi waxaa yiri Steve Warfield, oo ah afhayeen u hadley FBI-da xafiiskeeda Minneapolis.
Hadalka ka soo baxay FBI-da ayaa ka dambeeyey ka dib markii xoogaga xarakada Al-Shabaab ay xaqiijiyeen in nin ka mid ah dadkii isku qarxiyey xarumaha ciidamada AMISOM lagu magacaabo Cabdulaahi Axmed oo ah nin Soomaali ah oo haysta dhalashada Mareykanka oo ka yimid magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka.
“Ma ogin ilaa iyo hada in qofkaasi uu ka yimid Minnesota iyo in kale, mana hayno jawaabta arinakasi ilaa aynu helno cadeymo rasmi ah oo muujinaya qofka is qarxiyey” ayuu hadalkiisa ku sii darey afhayeenka FBI-da.
Sida ay sheegteen ciidamada AMISOM ee midowga Afrika waxaa weerar ismiidaamin ah oo lala beegsadey saldhig ay degan yihiin oo ku yaal magaalada Muqdisho kaga qurbaxay laba askari, iyadoo uu ku dhintey ninkii weerarkaasi isqarxinta fuliyey.
Cod 20 daqiiqo ah oo la soo galiyey mid ka mid ah baraha Internet-ka ee taageersan Al-Shabaab ayaa waxaa ka ahdlaya nin magaciisa ku sheegay Axmed oo sheegay in uu ka yimid magaalada Minneapolis isagoo sheegay mudo laba sano ah uu ka mid ahaa xoogaga Al-Shabaab, isagoo codkaasi duubay daqiiqado ka hor intii aanu isqarxin.
“Waxaan ka mid ahaa Al-Shabaab mudo 2 sano ah, waxaan ka imid Minneapolis, waxaana ku faraxsanahay inaan jirkeyga & nolasheyda u jiheeyo Jihaadka, isla markaana aan gumaado munaafiqiinta” ayuu ku yiri codkaasi ninkaasi la sheegay in uu isqarxiyey.
Ninkan la sheegay in uu isqarxiyey ayaa sheegay in uu soo marey safar sida uu sheegay in uu ahaa mid qarsoodi ah oo uu kaga soo ambabaxay wadanka Mareykanka, isagoo ka gaabsadey in uu sheego halka uu soo marey, balse wuxuu sheegay in si raaxo leh uu ku soo gaarey wadanka Soomaaliya.
Cumar Jamaal oo ah xoghayaha koowaad ee ergada Soomaalida ee qaramada Midoobay ayaa sheegay in ninka codkiisa la soo galiyey barta Internet-ka hadii uu dib u celiyso xusuustiisa uu garanayo ninkaasi Cabdulaahi Axmed.
“Ninkan wuxuu ahaa nin dhalinayaro ah wuxuu ahaa tagsiile, wuuxuu deganaaa Minneapolis, hada ka hor dhawr mar ayaan la kulmay, waxaana ka wada doodnay xaalada Soomaaliya, iyo fikrdaha Jihaadka” ayuu yiri Cumar oo degan Minneapolis oo arimaha Soomaalida gobolkaasi.
“Aad ayuu u ahaa nin xagjir ah, wuxuu had iyo goor aaminsanaa in madaxiisa ay badashey dawlada Mareykanka, runtiina wuxuu ahaa nin cadeysta waxa uu aaminsan yahay” ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyey Cumar Jamaal.
Sanadkii 2008-dii tiro dhalinyaro Soomaali-Mareykan ah ayaa ka tagey magaalada Minneapolis halkaasi oo ah deegaanka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee waqooyiga Mareykanka degan.
Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen Soomaalida sida ay cadeeyeen hogaamiyeyaasha bulshada Minneapolis.
Qoyska mid ka mid ah wiilashaasi oo lagu magacaabo Jamaal Baana oo ay u sheegay Tv-ga CNN sanadkii 2009-kii in wiil ay dhaleen lagu diley dagaalada Muqdisho kaasi oo ka tagey Minneapolis ayna ku arkeen meydkiisa Internet-ka.
Shirwa Axmed oo 27 sano jir ah oo ka mid ah dhalinyaradaasi ka tagey Mareykanka ayaa isaguna isqrxin uu ka geystey Soomaaliya wuxuu galaaftey nolashiisii iyo 29 qof oo kale sanadkii 2008-dii, waxaana ninkaasi la aaminsan yahay in uu ahaa qofkii ugu horeeyey haysta dhalashada Mareykanka ee isku qarxiya Soomaaliya taasi oo kor u qaaday dareenka hay’adaha sirdoonka Mareykanka.
Gudaha wadanka Mareykanka tiro Soomaali dhalinyaro ah ayaa lagu hayaa baaritaano iyo dacwado ku lug leh falalka argagixisada, kuwaasi lagu eedeynayo inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab.